ASUR dia manome fanavaozana ny fahazoana ny Kolombiana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » ASUR dia manome fanavaozana ny fahazoana ny Kolombiana
Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV, vondrona seranam-piaramanidina natokana voalohany tany Mexico ary mpiasan'ny seranam-piaramanidina Cancun ary seranam-piaramanidina valo hafa any atsimo atsinanan'i Mexico, ary mpiara-miasa amin'ny JV ao amin'ny Aerostar Airport Holdings, LLC, mpandraharaha ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Luis Muñoz Marín tany San Juan, dia nanambara androany fa nahazo fankatoavana ara-dalàna izy hanatanterahana ny fahazoana ny Airplan, SA
Ny Airplan dia manana alalana hampiasa an'ireto seranam-piaramanidina manaraka ireto any Kolombia: ny seranam-piaramanidina Enrique Olaya Herrera ary ny seranam-piaramanidina iraisampirenena José María Córdova any Medellín, ny seranam-piaramanidina Los Garzones any Montería, ny seranam-piaramanidina Antonio Roldán Betancourt any Carepa, ny seranam-piaramanidina El Caraño any Quibdó ary ny Las Brujas Seranam-piaramanidina any Corozal. Aorian'ny famaranana ny fahazoana, ny ASUR dia hanana eo amin'ny 92.42% amin'ny tahirim-bolan'ny Airplan. Ny faran'ny fahazoana ny fiaramanidina dia andrasana amin'ny faran'ny volana oktobra.
Ny ASUR dia mbola tsy nahazo fankatoavana ara-dalàna hifanaraka amin'ny fahazoana azy Aeropuertos de Oriente SAS (Oriente). Manoloana ny fanekena ny lalàna mifehy ny fahazoana ny Oriente, ny mpivarotra sy ny ASUR dia nanaiky ny hifampiraharaha am-pahatokisana amin'ny fanitsiana ny vidin'ny fividianana sy ny fepetra ary ny fifanarahana tamin'ny fahazoana azy ireo, ary hampiasa ny ezaka ara-barotra azo ekena hahazoana ny mifandraika amin'izany. fankatoavana ara-dalàna.
Oriente dia manana alalana hampiasa an'ireto seranam-piaramanidina manaraka ireto any Kolombia: ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Simón Bolivar any Santa Marta, ny seranam-piaramanidina Almirante Padilla any Riohacha, ny seranam-piaramanidina Alfonso López Pumarejo any Valledupar, ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Camilo Daza any Cúcuta, ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Palonegro ao Bucaramanga ary ny seranam-piaramanidina Yariguíes any Barrancabermeja. Raha tapitra ny fividianana Oriente dia hanana hatrany amin'ny 97.26% ny tahiry renivohitra Oriente.
WestJet dia namoaka ny Boeing 737 MAX voalohany any Canada
WTM London: Ahoana no fomba hamolavolana ny haitao amin'ny fitsangatsanganana amin'ny ho avy sy ny fandraisana vahiny